NGABA IJUGGERNAUT KALIL WAYNE INGAQHUBELEKA? – IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
Ngaba ijuggernaut kaLil Wayne ingaqhubeleka?
U-Lil Wayne uzibiza ngokuba ngoyena rapper ubalaseleyo ophilayo.
Akukho nto intsha okanye inoveli ngaloo nto, xa kujongwa indlela abarepha abancinci abathanda ngayo ukwenza amabango angekho ngqiqweni obukhulu babo. Ewe, ihlala ibonakala ngathi isiqingatha sehip-hop sakhiwe kwi-bravado kunye nokuzithengisa.
Nangona kunjalo xa uWayne ezibeka phakathi kukaTupac Shakur, i-Notorious B.I.G. kunye noJay-Z kwi-hip-hop's Mt. Rushmore - ngokuchanekileyo oko akwenzayo kwingoma kaMnu Carter - ayivakali kungenangqondo. Ngapha koko, kubonakala ngathi kusengqiqweni, xa ucinga ukuba i-rapper eneminyaka engama-28 ubudala yaseNew Orleans sele ifezekisekile ngokwentengiso yerekhodi, iingoma ezibethwayo, iirisithi zokhenketho kunye nodumo olubalulekileyo. Kwaye izakhono zakhe zokurapha kunye nobuchule bokubhala amagama abulalayo akunakuphikiswa.
Kodwa ukuba indoda ezalwe nguDwayne Michael Carter Jr. ifanelwe kukubekwa phakathi kwamagcisa abalaseleyo ehip-hop, ukwafuna iqhuma lomsebenzi. Emva konyaka apho wayegwetywe entolongweni kwaye wakhulula ii-albhamu ezimbini ezingazange zibe nempembelelo encinci, ukhwele kakhulu kwi-albhamu yakhe ezayo ye-Tha Carter IV - kunye nokhenketho lwekonsathi oluza kuchukumisa ngeCawa e-Oracle Arena yase-Oakland.
Kwabanye, akukho sizathu sokuxoxa ngesimo sikaWayne kwi-hip-hop.
Ngokuqinisekileyo uyintsomi, utsho igcisa lehip-hop leFat City uBryan Birdman Williams. Ungoyena rapper ubalaseleyo ophilayo.
U-Birdman, naye ohamba ngegama lesidlaliso uMntwana, unesizathu esihle sokuthetha noWayne: Ungumseki welebula kaWayne, Iirekhodi zeCash Money. UWayne uye wanceda u-Birdman ukuba abe yindoda ecebileyo - iForbes yakha yalinganisa i-net yakhe njenge-$ 100 yezigidi - kwaye ngoko ayikwazi kuthathwa njengomthathi-nxaxheba ongakhethi cala kule ngxoxo.
Nangona kunjalo u-Birdman usebenze kunye neqela labanye amagcisa abalulekileyo, kwaye wafumana amanqaku eplatinam kunye neqela lakhe, i-Big Tymers, kwaye akukho nto iphikayo ukukholelwa kwilizwi lakhe njengoko ebhengeza uWayne njengoyena mkhulu kumdlalo.
Njengomculi, uyiphakheji epheleleyo, uBirdman uthi. Uyi-rapper enkulu. Unayo intlanzi. Usebenza nzima. Ukrelekrele. Ungusomashishini olungileyo. Akaze amkele (nantoni na) ephantsi kweNombolo 1. Akukho mntu wumbi osondeleyo kuye.
UCortez Bryant, umanejala kaLil Wayne ixesha elide, ukwathe uWayne wenza izinto ezininzi ngendlela emangalisayo, esithi unika umrepha ukuzithemba ukuzama izinto ezintsha.
UWayne wahlukile kuba akoyiki ukuphuma apho emlenzeni kwaye athathe amathuba ngomculo wakhe, utshilo uBryant. Unokuba ngumdlali we-rock, unokuba yi-rapper, okanye unokuba yimvumi. Uyakwazi ukusibamba isiginkci, uyakwazi ukungcangcazela. Unokuthetha ngothando, aze ajike akunike esona sitrato sinzima (iingoma) owakha waziva. Wahlukile nje.
Amanani abonakala exhasa imeko kaWayne. Ukuqhubeka kwakhe kubandakanya ii-albhamu ezisibhozo ezithe ngqo ze-20, ezimbini zazo ziye kwiNombolo ye-1, kunye ne-11 yeengoma eziphezulu ze-40. Loo nto ayithatheli ngqalelo imbonakalo yakhe kwishumi elinesibini okanye ngaphezulu hits kwamanye amagcisa.
Kananjalo akanqeni xa kuziwa kukhenketho. UGary Bongiovanni, umhleli-oyintloko wekonsathi yoshicilelo lorhwebo lwekhonsathi i-Pollstar, ubiza uWayne omnye wezenzo ezimbalwa zolo hlobo ezinokuthengisa amatikiti anzima kwinqanaba le-arena. Kuhambo olukhulu lokugqibela lukaWayne, oluquka i-arena engama-78 kunye neentsuku ze-amphitheatre kwithuba leenyanga ezilithoba ngo-2008-09, wafumana ngaphezulu kwe-40 yezigidi zeedola kwaye watsala abalandeli abangama-800,000. Lukhenketho lwerap olungenisa imali ephezulu kwimbali.
Sifikelela usukelo oluphezulu, utshilo uBirdman ngokuthelekisa uWayne nabanye abarepha. Sizama ukuphumeza into ekungekho mntu uyifezileyo, ngokwamanani.
Ayinguye wonke umntu onomdla, okanye ozithembileyo, njengoBirdman noBryant xa kufikwa kwisimo sikaWayne. U-Oliver Wang, ophumelele isidanga sase-UC Berkeley owabhala kunye incwadi ethi Classic Material: ISikhokelo seAlbham yeHip-Hop, kwafuneka acamngce ngalo mbandela kangangemizuzu embalwa ngaphambi kokuba afikelele kwisigqibo sakhe malunga nokuba uWayne ukufanele na ukuqukwa phakathi kwexesha lonke. iirapper ezibalaseleyo.
Ukuziva kwam amathumbu ngo-2011 akukho, utsho uWang, oquka uSnoop Dogg kunye ne-Public Enemy's Chuck D kuluhlu lwakhe lwee-greats zexesha lonke. UWayne kuya kufuneka atshintshe ihip-hop njengoko siyayazi ukuze enze (ukusika).
UWang uvakalelwa kukuba uWayne unamandla okuba ngumdlali obalaseleyo, kodwa ngokuqinisekileyo akakabonakalisi mva nje.
Ngo-2011, ngaba ndiza kumbeka kuluhlu lwam oluphezulu lwe-10 (rappers)? Mhlawumbi akunjalo, utsho. Kwi-20 yam ephezulu? Ewe.
Kodwa ukuba ubunokundibuza ukuba malunga nexesha lokuphuma kuka-Tha Carter III, ndicinga ukuba bendinokuba nempendulo eyahlukileyo.
Kuninzi okwenzekile kwihlabathi likaWayne ukususela kwi-2008 ye-Tha Carter III, ulandelelwano ukuya kwi-2005 ye-platinum yokuthengisa iTha Carter II. I-albhamu yenza uWayne waba yinkwenkwezi enkulu ngakumbi, ethengisa iikopi ezingaphezulu kwesigidi se-1 kwiveki yokuqala yokukhululwa kunye nokuphelisa i-albhamu ethengisa kakhulu. Ikwaphumelele imbasa yeGrammy yelona cwecwe libalaseleyo le-rap.
Kodwa emva kokuba i-blockbuster yakhe ndiyi-Music Tour ngo-2008-09, wayenomdla okhethekileyo ngo-2010. Wazinika i-makeover ekuqaleni konyaka kwaye wakhulula irekhodi yakhe yokuqala ye-rock, Ukuzalwa kwakhona, ehlanjululwe ngabagxeki kwaye yagwenywa (ubuncinci ngemigangatho ephezulu kaWayne. ) ngabathengi. Wayilandela emva kweenyanga ezimbalwa ngomnye umnikelo we-iffy, AndingoMntu, owalawula ngcono noko kwiirejista zemali kwaye wafumana uphononongo oluxubeneyo. Zombini ukuphuma, ngokubhekiselele kwiintengiso kunye nokufaneleka kwezobugcisa, zazingaphantsi koko waphumelela kwi-Tha Carter III, enye yee-albhamu ze-zeitgeist zokwenyani zeshumi leminyaka.
Leyo yayiyinxalenye nje encinane yeengxaki zakhe. Eyona inkulu yayikukuba kwafuneka achithe iinyanga ezisibhozo kwintolongo yaseRikers Island emva kokuvuma ityala lokuzama ukuba nesixhobo solwaphulo-mthetho.
Ngaba kukho into yokungqina?
Ngaloo ndlela, abanye bakholelwa ukuba uWayne, okhululwe entolongweni ngoNovemba, ukhwele kakhulu ngoMeyi 16 ukukhululwa kweTha Carter IV.
Ndicinga ukuba unento anokuyingqina, uWang ugqabaza. Kwaba - yintoni? - iminyaka emithathu ukususela ekubeni 'uTha Carter III' waphuma. Kwaye kwiminyaka ye-hip-hop, efana neminyaka yenja, yinto engunaphakade.
Abanye bavakalelwa kukuba uCarter IV akayi kungqina nto.
Akukho nto ingako ikhoyo ngoku malunga nelifa, itsho intatheli ye-hip-hop yaseBay Area uDavey D. Kusenokubakho inkxalabo malunga nokubuyisela nayiphi na imali efakiweyo. Kodwa ngo-2011, basebaninzi abangazange bamamele kwixesha lakhe elidlulileyo. iminikelo. Eli cwecwe liyinto engekhoyo malunga nokuseka ilifa lakhe ngaphandle kokuba enze into emangalisayo.
Kwaye yiloo nto kanye abalandeli abafanele bayilindele, ngokutsho kukaBirdman, ngubani, ewe, sele evile uTha Carter IV.
Umculo uyamangalisa. Ukuza kuthi ga ngoku, ndingathi yeyona nto ilungileyo ayenzileyo, uBirdman uyakhala. Ungaze ubujongele phantsi ubuchule bakhe. Ngaphandle kwamathandabuzo, ('Tha Carter IV') uya kuvala nabani na onamathandabuzo.
Ndikunye noNicki Minaj, uRick Ross, uTravis Barker kunye noMxube uMphathi uMike
NINI: 6 p.m. iCawe
PHI: I-Oracle Arena, 7000 Coliseum Way, Oakland
Amathikithi: $ 59.75-$ 125.75; www.ticketmaster.com